Tia olona tsy mino an'Andriamanitra koa i God Switzerland (WKG)
Isaky ny misy adihevitra momba ny fanontaniana momba ny finoana, dia manontany tena aho hoe maninona no toa ny mpino no mahatsapa fa tsy manelingelina. Toa ireo mpino dia toa nilaza fa nahazo porofo ny atheista raha tsy hoe ny mpino dia nahomby tamin'ny fandavany azy ireo. Ny tena marina dia tsy afaka manaporofo fa tsy misy Andriamanitra. Satria ny mpino dia tsy maharesy lahatra ny tsy mino an'Andriamanitra ny fisian'Andriamanitra. Nanasongadina ny lahatsoratr'i Atheist Bruce Anderson tao amin'ny lahatsorany hoe "Fiaikenan'ny Atheista": "Tsara ny mahatadidy fa ny ankamaroan'ny olona hendry indrindra izay niaina hatrizay dia mino an'Andriamanitra." Betsaka ny tsy mino an'Andriamanitra tsy te hanao izany. Minoa ny fisian'Andriamanitra. Aleon'izy ireo kokoa ny mahita ny siansa ho lalana tokana mankany amin'ny fahamarinana. Nefa ve ny siansa no tena lalan'ny fahamarinana?
Ao amin'ny boky nosoratany: "The Devil's Delusion: Atheism and the Scientical Pretension", ny agnostika, David Berlinski, dia manantitrantitra fa ny teoria manjaka momba ny fisainan'ny olombelona: ny big bang, ny niandohan'ny devoly devoly: tsy mino an'Andriamanitra sy ny finoany ny siansa. Ny fiainana sy ny fiavian'ny raharaha dia misokatra amin'ny adihevitra rehetra. Ohatra, manoratra izy:
"Ny filazana fa ny fisainan'ny olombelona dia vokatry ny evolisiona dia tsy zava-misy marina. Dia nifarana ianao teo. "
Mahalala mpahay siansa manokana aho. Ny sasany amin'izy ireo dia mpitarika eo amin'ny sahan'izy ireo. Tsy manana olana izy ireo hampifanaraka ny fitohizan'ireo zavatra hitohizany amin'ny finoany an'Andriamanitra. Arakaraka ny ahitan'izy ireo momba ny famoronana ara-batana, no vao maika manamafy ny finoany ny Mpamorona izany. Nasongadin'izy ireo ihany koa fa tsy misy fisedrana azo atao, izay manaporofo na manohitra ny fisian'Andriamanitra indray mandeha. Hitanao fa Andriamanitra no mpamorona fa tsy ampahany amin'ny famoronana. Tsy afaka "mahita" an'Andriamanitra ianao amin'ny fitadiavana azy amin'ny alàlan'ny famoronana lalina kokoa. Andriamanitra dia manambara ny tenany amin'ny olona amin'ny alàlan'i Jesosy Kristy zanany ihany.
Izany no antony ilaiko atheista iray fa azo porofoina miaraka aminy fa tsy misy Andriamanitra ary tsy miaraka amiko hoe misy izy. Raha vao manaiky azy ianao dia hino koa. Inona ny tena famaritana ny atheista? Ny olona izay tsy (mbola) mino an'Andriamanitra.